Darasaad la sameeyay oo lagu ogaaday in ardayada dhigata dugsiyada dowlada aynan waxbarshadoodu wanagsaneyn – The Voice of Northeastern Kenya
Darasaad la sameeyay oo lagu ogaaday in ardayada dhigata dugsiyada dowlada aynan waxbarshadoodu wanagsaneyn
Darasaad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ardayda dhigata dugsiyada dowliga ah aynan sidii la rabay wax u baranin marka loo barbardhigo kuwo wax ka barta dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay.
Waa sanadkii 6-ad oo ay hay’ada Uwezo Kenya soo saareyso in isku celcelis 30 canug keli oo ka mid ah 100 arday oo dhigata fasalka 3-ad ay si sax ah uga jawaabi karaan suaalaha la xiriira casharada loogu talagalay ardayda fasalka 2-ad.
Sido kale waxaa warbixinta lagu ogaaday in 8 ka mid ah 100 arday oo ku jirta fasalka 8-ad aynan si sax ah uga soo bixi Karin casharada fasalka 2-ad ee dugsiga hoose dhexe.
Darasaadkan ayaa sido kale lagu sheegay in tirada macalimiinta ay weli hooseyso marka loo barbardhigo tirada ardayda oo ay wax baraan.
Isku celcelis waxaa warbixinta laga soo saaray darasaadka la sameeyay lagu sheegay in dugsi kasta ay 12 macalin wax ka dhigaan halka dugsi kastana uu leeyahay 10 fasal.
Mamul goboleedyada ugu wanagsan oo tirada macalimiinta anan laga deyrineyn ayaa waxaa ka mid ah Kirinyaga, Kiambu, Embu, Nakuru, Nairobi, Kisii iyo Baringo halka countiyada ay tirada macalimiinta ay hooseyso ayaa waxaa ka mid ah Mandera iyo Garissa oo 6 macalin ay dhigaan dugsi ka kooban 10 fasal.
Darasaadkan ayaa lagu eegay in ka badan 130,000 oo caruur ah ooa y da’doodu u dhexeyso 6 ilaa 16 oo ka soo jeedo dhamaan maamul goboleedyada dalka waxayna sarakiisha hay’ada Uwezo Kenya ee warbixinta soo saaray booqdeen in ka badan 4,500 oo dugsi iyo 69,000 oo qoys.
← Kenya oo lagu amaanay la tacaalidda cudurka duumada
Shacabka magaalada Xalab ee suuriya oo maalinkii labaad la daad gureyn doono →